Inona no ho hita any Berlin | Vaovao momba ny dia
Berlin Io no iray amin'ireo renivohitra be mpitsidika indrindra an'i Eropa ary na dia izany aza a priori Tsy mamirapiratra toa an'i Paris na Wina izy, ny tena marina dia tanàna tsara tarehy izy ary manana manintona maro. Mety tsy izany no toerana tsara indrindra hitsidihana amin'ny ririnina raha tsy tianao ny fanala, kanefa, amin'ity vanim-potoana amin'ny taona ity, tsara be izany.
Andao hojerentsika ary inona no hitsidika an'i berlin.
2 Fizahan-tany any Berlin
Any avaratra atsinanan'ny firenena izy io, no tanàna misy mponina betsaka indrindra ary nanomboka tamin'ny tapany voalohan'ny taonjato faha-XNUMX. Io no renivohitry ny Fanjakan'ny Prussia, ny Repoblika Weimar ary ny Reich Fahatelo, na dia somary nalahelo kokoa aza ny fiafarany taorian'ny nifaranan'ny Ady Faharoa rehefa nizara taorian'ny fizarana ny firenena ho repoblika roa izy.
Araka ny voalazantsika tetsy ambony Mangatsiaka be ny ririninaZara raha misy masoandro amin'ny tolakandro, fohy ny andro ary misy orambe sy oram-panala tsy tapaka miaraka amin'ny rivotra mangatsiaka milatsaka avy any Russia ary lasa mangatsiaka ity vanim-potoana ity.
Fizahan-tany any Berlin
afaka miresaka momba izany ve isika tranokala vitsivitsy fa amin'ny fitsidihana voalohany any Berlin dia tsy azo adino. Voalohany dia ny Reichstag. Ity tranobe ity dia eo amin'ny manodidina an'i Tiergarten ary izy no sezan'ny Empira Alemanina teo anelanelan'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX sy ny fiandohan'ny faha-XNUMX. Avy eo dia ilay parlemantera weimar ary hatramin'ny 1994 dia izy no foiben'ny isaky ny dimy taona Antenimiera federaly nofidian'ny filoha alemana.
Vita tamin'ny 1894 ary manana neo fomba fanavaozana. Ny anarany dia tsy midika zavatra hafa ankoatry ny parlemanta ary natsangana izy io rehefa niforona ny Empira Alemanina dia nilaina ny trano lehibe kokoa hampivondronana ireo solontenan'ny firenena rehetra.
En 1933, iray volana taorian'ny nanendrena an'i chancellor, ny Reichstag niakatra nirehitra miaraka amin'ny afo izay mbola tsy voavaha androany. Taorian'izany dia nisy ny fampihorohoroana nazia navoaka, ny fanimbana ny zon'olom-pirenena sy ny onjan'ny fikorontanana anaty izay efa fantatsika ny niafarany. Taorian'ny faran'ny Ady faharoa dia rava tanteraka ilay trano ary nanodidina azy ireo dia nisy zaridaina namboarina nambolena hanome sakafo ny mponina.
Tany antenatenan'ireo taona 50 dia tapaka ny hevitra fa hanangana ny tranony amin'ny fomba fisaka sy henjana, miaraka amin'ny tsipika mahitsy ary tsy misy haingon-trano firy. Androany dia azo tsidihina izy io ary tsy maintsy voasoratra anaty Internet ny fitsidihana Voalohany. Ny fitsangatsanganana voatondro dia tsy azo angatahina afa-tsy amin'ny iray volana na amin'ny roa volana manaraka.
La Vavahady Brandenburg Fitsidihana faharoa anay izao. Sary malaza sy iray amin'ireo rafitry ny tantara tafavoaka tamin'ny fotoana izy io ary maneho ny fisarahan'ny firenena amin'ny fotoanan'ny Ady mangatsiaka ary eny, izany koa ny andro fampiraisana. Izany dia fomba neoclassical y naorina teo anelanelan'ny 1788 sy 1791 izy io, noforonin'i Carl Gotthard Langhans, aingam-panahy avy amin'ny Acropolis of Athens.
Ny varavarana 26 metatra ny haavony, 65.5 metatra ny halavany ary 11 metatra ny sakany misy tsanganana Dôtô enina. Tamin'ny 1793 dia nandresy ny vavahady quadriga, izay notaterin'i Napoleon rehefa nanafika ny tanàna izy tamin'ny 1806. Taorian'ny nandaozany ny fanjakana dia niverina tany Berlin sy ny vavahady ny sary vongana, hijanona eo amin'ny lafiny sovietika aorian'ny 1946. Nankalaza ny Taom-baovao 1989 ny olona, ​​niaraka tamin'ny Fahalavan'ny Wall, eto ihany. Ny vavahady Branderburg tsy mihidy mihitsy fa ny hevitra tsara dia ny mitsidika azy rehefa mampiantrano hetsika. Aza adino ny fitsidihana ny tranombakoka Branderburg Gate.
La Berlin TV Tower, antsoina koa hoe Fernsehturm, manjaka amin'ny lanitra ny tanàna 368 metatra ny haavony ary natsangana tamin'ny taona 60 '. Mandritra ny fitsidihanao dia afaka mankafy a fomba fijery panoramic tsara tarehy avy any ambony. Miaraka amin'ny karatra fizahan-tany ao an-tanàna, ny Berlin Welcome Card, manana fihenam-bidy 25% ianao. Manararaotra!
tilikambo dia ao amin'ny Alexanderplatz ary mitana ny lohatenin'ny maha ny trano avo indrindra any Eropa misokatra ho an'ny besinimaro. Natsangana tao anatin'ny efa-taona monja izy io, notokanana tamin'ny Oktobra 1969. Nataon'i Hermann Henselmann. Taorian'ny fampiraisana an'i Alemana roa dia tsy tandindon'i Alemana Atsinanana intsony ilay tilikambo ary tafiditra ao Berlin tanteraka. Androany dia mandray mpitsidika iray tapitrisa isan-taona avy amin'ny firenena 86 izy.
Ny metatra fandinihana ny Berlin TV Tower dia 200 metatra ny haavony ary manana bara sy trano fisakafoanana mihodina. Raha mikasa ny hankany amin'ity trano fisakafoanana ity ianao dia tsara kokoa ny mamandrika amin'ny Internet. Niakatra 40 segondra monja ny ascenseur ary aorian'ny fihainoana dia afaka mijanona eo amin'ny fivarotana fanomezana foana ianao ary mitondra fahatsiarovana miaraka aminao. Misokatra ny tilikambo manomboka ny volana martsa ka hatramin'ny oktobra manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny misasakalina ary manomboka amin'ny volana novambra ka hatramin'ny desambra manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny misasakalina koa.
Manaraka io tilikambo io Gendarmenmarkt, kianja izay akaiky an'i Friedrichstrasse sy izany mifantoka amin'ireo tranobe mahafinaritra telo ao an-tanàna: ny efitrano fampisehoana ary ny katedraly frantsay sy alemanina, ny Deutscher Dom sy ny Französischer Dom. Tsy fiangonana roa izy ireo fa tilikambo. Ny iray amin'izy ireo dia misy ny Museum Huguenot ary ny iray fampiratiana maharitra ny tantaran'ny parlemantera. Betsaka no milaza an'izany Io no kianja tsara indrindra any Eropa ary tsy misy fisalasalana amin'ny fahavaratra dia toerana itoerana maharitra izy io.
Taorinan'ny ady dia rava ny kianja fa tamin'ny taona 70 ny governemanta Berlin dia nanangana sy nanamboatra azy tamin'ny anarana Platz der Akademie. Ny anarana Gendarmenmarkt, dia nisy hatramin'ny nanombohany tamin'ny 1991. Raha mandeha ianao amin'ny fahavaratra dia ny kianja no toerana anaovan'ny Classic Open Air, kaonseritra mahafinaritra, ary raha mandeha amin'ny ririnina ianao dia mampiantrano ny Tsenan'ny krismasy.
Ny Katedraly Berlin dia nanomboka tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX ary izy no fiangonana protestanta manan-danja indrindra eto an-tanàna. Tsy katedraly ara-dalàna fa fiangonana paroasy. Fiangonan'ny tarana-mpanjaka Hohenzollern, amperora Alemanina sy Prussia ary efa teo amin'ny toerana iray ihany dia nisy ohatra taonjato maro talohan'izay. Mazava ho azy fa nijaly mafy ny fiangonana tamin'ny fanapoahana baomba tamin'ny Ady Faharoa saingy naverina tamin'ny laoniny tanteraka 44 taona lasa izay.
Fiangonana azo tsidihina ary misy fitsangantsanganana misy torolàlana isaky ny 20 minitra: ny lehibe indrindra, ny Chapelle Marriage, ny Hohenzollern Crypt miaraka amina sarcophagi 100 avy amin'ny taonjato dimy, ny tranombakoka misy ny tantaran'ny tranobe, ny tohatra amperora izay miakatra tohatra 270 mankany an-tampon'ny dome mba jereo ny tanàna eo an-tongotrao.
Tsy azon'izy ireo atao ihany koa ny mitsidika ny fitsidihana ny Lapan'i Charlottenburg, ivelan'ny afovoan-tanàna, fa miaraka amina fanangonana sary hosodoko sinoa sy porcelain izay hatsarana iray, eo afovoan'ny zaridaina izay tsy latsa-danja ary miaraka amin'ireo tranombakoka mahaliana hafa. Ary ny firesahana ny tranombakoka dia Ny Nosy Museum, tranokala iray manerantany araka ny UNESCO sy ny foiben'ilay Altes Museum, Museum vaovao, Museum Bode, Museum Pergamon ary ny National Gallery taloha. Enina arivo taona mahery ny tantara no mifantoka eto ary ho an'ny fitsidihana dia mora ny manana ny Karatra Tongasoa eto Berlin.
Ary farany, tsy afaka miala ao Berlin ianao raha tsy mitsidika ny Fahatsiarovana an'i Wall Wall ary ny Ivon-taratasy. Androany, raha manohy manangana rindrina izao tontolo izao dia tsy tokony hohadinointsika ny fotoana hamelomana indray ity, izay rindrina malaza indrindra tamin'ny tantara farany teo. Any anelanelan'ny distrikan'ny Wedding sy Mitte, eo amin'ny Bernauer Street, dia misy ampahan'ny rindrina tany am-boalohany sy ny tilikambo fandinihana izay mamela ny mamerina amin'ny fomba voafaritra iray izay misy sisintany anatiny.
Ary ho fahatsiarovana dia afaka foana ianao mitsidika an'i Potsdamer Platz sy Kurfürstendamm, iray amin'ireo toerana manokana hiantsenana na, raha mandeha miaraka amin'ny ankizy ianao, tsidiho ny Zoo Berlin, ilay zokiny indrindra ao amin'ny firenena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Berlin » Inona no ho hita any Berlin
Inona no ho hita ao amin'ny Funchal
Inona no ho hita any Menorca